Qarax uu fuliyay naftii halige oo saaka ka dhacay Muqdisho – Radio Muqdisho
Qarax uu fuliyay naftii halige oo saaka ka dhacay Muqdisho
Qarax uu fuliyay nin naftii halige ah oo xirnaa Jaakadda Qaraxyada ayaa saaka ka dhacay Muqdisho kaasoo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska ayaa Wakaaladda SONNA u sheegay in inta la ogyahay dhimashadu ay tahay ku dhawaad 10 qofood, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Naftii haligahan ayaa isku qarxiyay goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidanka Booliska oo ku sugnaa barxadda dugsiga tababarka ee Genraal Kaahiye, kuwaasi oo isku diyaarinayay in ay gutaan howlmaalmeedkooda.
Saraakiisha ayaa sheegtay in ninkan isqarxiyay uu xirnaa dharka Sportska oo uu ku dulxirtay Jaakadda Qaraxyada, wuxuuna ka soo baxay meel luuq ah, iyagoo intaasi ku daray in qasaaraha intaasi uu ka badan lahaa haddii uu gaari lahaa halka ay ku feylaan ciidanka, balse uu qalqalay islamarkaana halkaasi isku qarxiyay.
Dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaallada magaalada Muqdisho, waxaana saraakiishu ay sheegayaan in qasaarah uu intaasi ka badnaan karo.
Baarlamaannnada Galmudug iyo Ahlunna oo la mideeynayo
Dhageyso: Barnaamijka Wadajir+Sawirro
Madaxweyne Xasan Sheekh oo magacabay La Taliyeyaal cusub
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa digreeto uu soo saaray waxa uu u magacaabay mudaneyaashan hoos ku...